Ny Stop Motion ho teknika ankehitriny amin'ny fomba fijery sary | Famoronana an-tserasera
Mercedes Big Real | | Inspiration
Inona no atao hoe fijanonana? Inona no vokany azoko? Teknika be mpampiasa ve io ankehitriny? Fanontaniana napetraka matetika ireo ankehitriny. Valiinay ireo fanontaniana ireo ho fanampin'ny fanavaozana anao amin'ity kely ity tontolo audiovisual amin'ny fomba fijery sary.
Ny fijanonana mijanona, azonao lazaina izany teknika tsy hiala amin'ny fomba mihitsy izany. Izy io dia be mpampiasa hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, ka hatramin'izao. Izy io dia karazana sary mihetsika izay nivoatra tsikelikely nandritra ny taona maro. Misaotra an'izay fomba malefaka be, mamela hirotsaka loharanom-pahalalana samihafa momba ny sary sy audiovisual para conseguir vokany maoderina sy ankehitriny na antitra.
Atsaharo ny fihetsiketsehana na ny sarimiaina amin'ny habetsahana, misy ny fitohizan'ny sary azo sary, izay samy hafa kely amin'ny sary teo aloha ny sary tsirairay. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manao sary mihetsika amin'ny alàlan'ny hetsika mihetsika, miaraka amin'ny zavatra na olona amin'ny toerana mijanona.
Amin'ity teknikan'ny sary mihetsika ity dia azonao atao hahatratra ny vokany sy ny estetika tsy manam-paharoa. Ireo sary mihetsika dia mahazo hatsarana am-boalohany ary tena hafa amin'ny sary mihetsika izay natao androany, ny ankamaroany dia amin'ny 3D. Raha ny hevitro, ireo sarimiaina ireo dia mahavita manaitra ny fahalianan'ny ampahibemaso na olon-dehibe na zaza ary misarika ny sain'ny roa mpijery manam-pahaizana bebe kokoa ary koa ireo vao manomboka, satria tsy manana ny fananana itarika azy amin'ny mpihaino kendrena izany. Kalitao tena lehibe io raha ny te hisongadina ary amin'ny fomba sasany ampahafantaro ny tenanao.
Anisan'ireo toetra mampiavaka ny sarimiaina, manelanelana ireo singa malaza be mpahalala eo amin'ny sehatra misy antsika: ny maha-izy azy sy ny famoronana an'ny mpanoratra tsirairay. Miankina amin'ireo lafin-javatra ireo ny toetra manokana toy ny vokany hafa mihintsy aza ary afaka misongadina ao anatin'ny tontolo audiovisual miaraka amin'i rafitra mekanika samihafa.
Tombony iray hafa amin'ity teknika ity ny azonao vokany tsy manam-paharoa na te hampiasa ianao teti-bola avo sy ambany, raha hiresaka ireo fitaovana tianao hovelomina dia azonao atao ny mampiasa loharano toy ny fampiasana loko fisaka, miaraka amin'ny fitaovana toy ny taratasy na zavatra misy hatsarana manokana toy ny tarehimarika geometrika na afaka mampiasa tarehimarika miaraka amin'ny volavola koa ianao, raha tianao hahatratrarana ny vokany amin'ny 3D ary amin'ity fomba ity dia manakaiky kokoa ny vokatra vaovao kokoa saingy ny fahazoana vokatra mamorona bebe kokoa avy amin'ireo sary mihetsika hafa, ireo vokatra ireo dia azo tratrarina ohatra amin'ny lalao maivana sy aloka samihafa.
Mpanakanto maro liana amin'ny sary audiovisual no sahy tamin'ity teknika manintona ity.
1 Rhea Lelina Manglapus
2 Ilay Printsy kely
Rhea Lelina Manglapus
Rhea dia mpamorona endrika maro karazana iza no mampiasa teknolojia analog sy nomerika amin'ny asanao famolavolana. Izy dia niasa ho animator mahaleo tena any New York sy amin'ny ekipa mpamorona horonantsary sy horonan-tsary ao amin'ny Apple Inc., California. Ny asany dia miavaka amin'ny fananana azy matetika toetra andrana ary ny teknikan'ny sarimiaina dia tena tany am-boalohany sy mamorona.
Ohatra, ny sarimiaina Tick ​​Tock dia fijanonana mijanona izay mikendry ny hampita amin'ny besinimaro ny ahiahy ankehitriny manoloana ny toe-javatra misy ny planeta amin'ny fomba fijery ekolojika, amin'ny alàlan'ny fiteny fohy sy andrana. Ampiasaina ny loharanom-pahalalana tsotra, amin'ny alàlan'ny tarehimarika miorina amina karazana sy aloky ny taratasy.
Raha te hahita asa bebe kokoa an'ity mpamorona ity ianao dia ny portfolio-ny eto.
Ilay Printsy kely
Ohatra iray fanta-daza sy malaza ankehitriny ihany koa ny tranga amin'ilay sarimihetsika "The Little Prince", notarihin'i Mark Osborne. Ity sarimihetsika ity dia mifototra amin'ny tantara nosoratan'i Antoine de Saint-Exupéry.
Mampiavaka ity sarimihetsika ity ny fifangaroany manokana amin'ny teknika audiovisual, izay nahavita namokatra vokatra miavaka sy tena mamorona. Mampiasà teknika fampihetsehana mihetsika sy nomerikaIty fitambarana ity dia nahasarika olona mpihaino olon-dehibe sy ankizy, izay nandraisana hevitra tsara.
Ny sombin-tsarimihetsika mijanona dia mampiasa tarehimarika tena misy amin'ny fitaovana mora azo. Mampiasa loko miloko mavo sy mavo maromaro izy io, manome toetra mampiavaka ilay sarimihetsika, ankoatra ny famoronana toetra manokana an'ilay sarimihetsika.
Raha mila aingam-panahy mijanona bebe kokoa ianao dia afaka mahita azy ireo eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ajanony ny Motion ho teknika ankehitriny
Pensilihazo sy saribao no mpiorina amin'ireo sary 3 tena tsara ireo